Sakoroka tany Mahajanga : Mitady hivadika resaka foko, nidina an-dalana ny zanak’i Boina – Midi Madagasikara
You Are Here: Home → Faits-Divers → 2014 → janvier → 14 → Sakoroka tany Mahajanga : Mitady hivadika resaka foko, nidina an-dalana ny zanak’i Boina
Tonga nampahery ny fianakavian’i Emilien ny avy ao amin’ny fitondrana.
Tsy dia mbola milamina loatra ny toe-draharaha any an-toerana. Samy olon-kendry anefa ny rehetra ka tsy nisy fifandonana
Omaly antoandro, nisy fihetsiketsehana teny anoloan’ny Lapan’ny tanàna taorian’ny nanaovana veloma ny fatin’ilay mpianatra maty voatifitra tamin’ny zoma. Nisy olona nilanja sorabaventy manohitra ny fanalana ny Filohan’ny oniversiten’i Mahajanga. Re tamin’izany ny fiantsoana ny zanak’i Boeny rehetra hanohitra io fanapahan-kevitra io. Efa tomefy mpitandro filaminana ny toerana talohan’ny nahatongavan’ireto mpilanja sorabaventy ireto. Nisy ny disadisa, hoy ny loharanom-baovao voaray avy any an-toerana. Efa saika raikitra mihitsy aza ny fifandonana. Nahafehy tena ihany anefa ny andaniny sy ny ankilany koa dia nilamina ihany ny raharaha. Ankoatra ireo fitakiana ireo dia fantatra ihany koa fa nanao fanambarana ny “collectifs des directeurs” ao amin’ny oniversite. Fanambarana izay manohitra ihany koa ny fanesorana ny filohany. Maro ny zavatra voalaza ao anatin’io fanambarana io.
Veloma farany. Fa mbola omaly antoandro ihany koa no nentina teo anoloan’ny Lapan’ny tanàna ny vatana mangatsiakan’ilay mpianatra maty vokatry ny tifitra nahazo azy tamin’ny zoma lasa teo. Fiandrarakoto Emilien, 24 taona, ilay mpianatra maty. Tomefy olona ny toerana,nahitana mpianatra marobe sy olontsotra ary ireo ray aman-dreniny. Tsy lavitra ihany koa ny mpitandro filaminana. Nisy ny kabary nifandimbiasana tamin’izany. Nentina any amin’ny tany niaviany any Bealanana faritra Sofia ny razana.
Raha ny vaovao voaray hatrany no jerena dia toa mbola tsy milamina ny ao amin’ny oniversite Ambondrona ao. Ny loharanom-baovao avy any an-toerana hatrany koa no nahalalana fa nisy fanimban-javatra niseho tao amin’ny toeram-pianarana. Tompon’andraikitra iray no nampita izany voavao izany. Potika tamin’izany ny efitra fianarana, ny trano ipetrahan’ireo “sécurité universitaire” ary ny Tsangambato misy ny anaran’ireo filoha nifandimby tao hatramin’izay. Efa nisy anefa ny fifanatonana tamin’ireo rehetra voakasik’ity tranga ity tany an-toerana.